Ohatra 5 amin'ny pop-up misy fikasana hivoatra izay hanatsara ny tahan'ny fiovam-ponao | Martech Zone
Raha manana orinasa ianao dia fantatrao fa ny fampahafantarana fomba vaovao sy mahomby kokoa amin'ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po dia iray amin'ireo lahasa lehibe indrindra.
Angamba tsy hitanao toy izany tamin'ny voalohany, fa ny pop-ups izay mety hivoaka dia mety ho vahaolana marina tadiavinao.
Fa maninona ary ary no fomba tokony hampiasanao azy ireo mialoha, ho hitanao ao anatin'ny iray segondra.
Inona avy ireo pop-up mikendry fivoahana?
Betsaka ny karazana varavarankely pop-up, saingy ireto no sasany amin'ireo be mpampiasa indrindra:
Kitiho ny pop-ups
Pop-ups misy fotoana
Mipoitra ny pop-ups
Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny tombony ananany, fa izao kosa dia holazainay ny antony mahatonga ny pop-ups izay manana fikasana hivoaka hanana tanjona lehibe tokoa hahatonga ny orinasanao amin'ny sehatra mahomby kokoa.
Hivoaka-finiavana pop-ups dia, araka ny filazan'ny anarany azy, dia varavarankely izay miseho rehefa misy mpitsidika te-hivoaka ny tranokala.
Fotoana kely alohan'ny hanondroan'ny mpitsidika ny bokotra hanakatonana ny vakizoro na ny fikandrana fitetezana dia hiseho ny varavarankely pop-up Manolotra tolotra tsy hay tohaina io izay misarika ny sain'ny mpitsidika ary mamporisika azy handray andraikitra.
Ireo pop-ups dia miorina amin'ny teknolojia fivoahana marani-tsaina izay manaiky ny fivoahana ary miteraka pop-up.
Ary maninona no tena zava-dehibe izy ireo?
Zava-dehibe izy ireo satria azonao ampiasaina izy ireo mba hialana amin'ny famonoana ny mpividy mety ho tonga!
Amin'ny alàlan'ny fampisehoana tolotra sarobidy sasany, afaka manomboka manova ny sainy ny olona ary manatanteraka ny tanjona apetrakao tokoa.
Na io tolotra io dia momba ny vaovao mahaliana sasany azon'izy ireo alaina amin'ny fampielezana mailaka na fihenam-bidy hividianana eo no ho eo, azonao atao ny manandrana mandresy lahatra ny olona hanaiky azy.
Mazava ho azy, misy zavatra sasany tsy maintsy ampiharinao toy ny:
Kopia fandraisana anjara
Tolotra apetraka am-pahalalana
Anisan'izany ny bokotra CTA (call-to-action)
Mety ho toa zavatra be dia be tokony hoeritreretina izany, fa hampiseho anao ny fomba fanao tsara indrindra tokony harahinao sy hampiasainao mifanaraka amin'ny tranonkalanao sy ny orinasanao amin'ny ankapobeny.
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny pop-up fikasana fivoahana
Mba hahafantarantsika tsara kokoa ny fomba fanao pop-up pop-ups dia hojerentsika an-tsary izy ireo amin'ny alàlan'ny ohatra mety amin'ny tranokala mahomby.
Ohatra 1: Manolora atiny sarobidy
Ny fanolorana votoaty sarobidy dia hevitra tsara foana. Rehefa fantatrao ny vondrona kendrenao dia afaka manomana atiny mahaliana ho azy ireo ianao.
Mety ho ireto:
Ho mora kokoa aminao ny mamorona tolotra tsy hay tohaina aorian'ny nandinihanao tsara ny tombontsoan'ny olona izay tianao hivadika ho mpividy ny vokatrao na serivisinao.
Ho fifanakalozana, dia hiala am-pifaliana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny mailaka izy ireo satria ”tena ambany ny vidiny”.
Rehefa avy nanangona fifandraisana ianao ary nanampy azy ireo tao amin'ny lisitry ny mailaka dia azonao atao ny manaparitaka ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika sy mifandray amin'ireo mpanjifanao ho avy.
Aza adino anefa fa tsy maintsy manatanteraka ny antenaina ianao, raha tsy izany, ho diso fanantenana ireo mpamandrika anao ary tsy hiverina intsony izy ireo.
Asehoy azy ireo fa ara-drariny tanteraka ny fahatokiana anao.
Ity misy ohatra iray avy Coschedule:
vanim-potoana: Coschedule dia manamboatra varavarankely pop-up izay ahafahan'ny mpitsidika manangona atiny sarobidy sasany. Araka ny hitantsika, dia nilaza tamim-pahakingana ihany koa izy ireo fa samy manolotra kalandrie sy e-book izy ireo, ary ny tsindrio eo amin'ny Get it now bokotra handraisana azy ireo.
Design: Volavola tsotra, fa misy loko mamirapiratra misarika ny saina. Ny sary eo ambonin'ny lahatsoratra dia porofo fa miandry azy ireo ny atiny, izany hoe ny fanamafisany.
handika: Amin'ny fifandraisana mivantana, Alohan'ny handehananao… tena manosika ny olona hijanona sy hihodina alohan'ny handehanan'izy ireo marina, ary izany dia ampiasaina am-pahendrena ao amin'ity pop-up havoaka ity ihany koa.
Tolotra: Toa manasa ny tolotra. Anisan'izany ireo teny drafitra ary mandamina manampy amin'ny fampifandraisana ny tolotra iray manontolo amin'ny famokarana tsara kokoa sy ny fahombiazan'ny fotoana.
Ohatra 2: Manolora fampisehoana mivantana
Ny demo dia fomba tsara hifandraisana amin'ireo mpitsidika anao.
Angamba toa sarotra loatra ny sehatra misy anao ary izany no antony itiavan'ny mpitsidika hivoaka ny tranonkalanao.
Raha manolotra serivisy iray ianao, dia ho azonao atao ny manazava mora kokoa ny fomba tokony hampiasana azy, inona ny tombony ary ny mitovy amin'izany.
Ny demo mivantana dia safidy tsara kokoa satria ny zava-mitranga rehetra amin'ny fotoana tena izy ary ny mpividy mety hahita ny fanavaozana sy ny vaovao rehetra.
Jereo hoe ahoana Zendesk nampiasa izany tao amin'ny fikandrana pop-up fikasan'izy ireo:
vanim-potoana: Satria Zendesk dia rindrambaiko tapakila fanampiana ny mpanjifa, ity pop-up ity dia fomba tsara hifaneraserana amin'ireo mpanjifany mety hanombohana fifandraisana.
Design: Tafiditra ao ny singa mahaolombelona, ​​izay manampy ny olona hifandray amin'ny orinasanao.
Tolotra: Ny demo dia tolotra lehibe satria ity sehatra ity dia mampanantena vahaolana izay hanampy anao amin'ny fitantanana ny orinasanao tsaratsara kokoa. Ary, ny zava-dehibe indrindra, dia manomboka tanteraka ny fampanantenan'izy ireo amin'izao fotoana izao, manomboka mahazo fanampiana avy hatrany ianao.
handika: Ity kopia ity dia manana feo mafana fo izay tsara hananganana fifandraisana matanjaka amin'ny mpanjifa. Amin'ny lafiny iray hafa, raha manana pejy sasany ianao eo am-panorenana, tsy mila miandry ianao hamita azy ireo vao manomboka mahazo mpanjifa sy mitarika avy amin'izany.
Azonao atao koa ny mametraka ny popup-nao amin'ny avy tsy ho ela pejy ary manomboka mandrehitra ny fantsom-pivarotana anao.
Ohatra 3: Lazao ny fandefasana maimaim-poana
Ny fandefasana maimaim-poana dia toa fehezan-teny majika ho an'ny olona te-hividy avy aminao.
Tokony ho fantatrao fa ny olona dia tsy tia mandoa vola amin'ny lafiny hafa. Aleon'izy ireo mandoa zavatra bebe kokoa aza noho ny mandoa vola fanampiny amin'ny fandefasana.
Raha tsy azonao atao ny mampihena ny vidin'ny fandefasana azy dia tsara kokoa ny mampiditra azy ireo amin'ny vidiny fototra toy izay mametraka azy eo amin'ny fivarotanao.
Na izany aza, raha afaka manolotra fandefasana maimaim-poana amin'ny mpanjifanao ianao dia tokony hanao izany. Hanomboka hitombo ao anatin'ny fotoana fohy ny varotrao.
Ity misy ohatra iray avy Brooklinen:
vanim-potoana: Brooklinen dia orinasa mivarotra lambam-pandriana, ka tsy mahagaga raha mahita lambam-pandriana ahazoana aina ao anaty fipoahana fikasana fivoahana isika.
Design: Fototra fotsy, endritsoratra mainty. Saingy, tena tsotra ve izany? Ny takelaka eo amin'ny sary ambadika dia azo antoka fa toa izany no kendrena. Toa olona vao nifoha avy teo am-pandriana mahafinaritra izy ireo. Toy ny manandrana mitaona antsika hividy ireto takelaka ahazoana aina ireto izy ireo, izay azo antoka fa manintona, indrindra raha efa nahatsiaro reraka ianao rehefa niseho ity pop-up ity.
Tolotra: Mazava fa mazava ny tolotra ary tena mandaitra.
handika: Tsy misy teny tsy ilaina, kopia madio sy mazava.
Ohatra 4: Miantso ny olona hisoratra anarana amin'ny newsletter
Ny newsletter dia karazana atiny sarobidy, indrindra raha manao tsara ianao izay ahafahan'ny olona ampahafantarina ny zava-dehibe ary tsy hahatsapa ho voatosika hividy zavatra avy aminao.
Io dia mamela anao hifandray hatrany amin'ny mpanjifanao.
Ny fanaovana fampielezan-kevitra amin'ny mailaka dia midika fa tokony haharitra ianao mba hahafantaran'izy ireo tsara hoe rahoviana no manantena vaovao vaovao avy aminao.
Toy izao GQ nampihatra izany tamin'ny azy ireo varavarankely fisehoana:
vanim-potoana: Ny GQ dia magazine an-dehilahy iray izay mandrakotra ny fomba fiainana, lamaody, fitsangatsanganana, sns.
Design: Averina indray, tafiditra ao ny vatan'olombelona. Hatsikana kely amin'ny sary sy ny sisa pop-up dia tsotra kely, izay mampifangaro tsara.
Tolotra: Manolotra torohevitra sy tetika afaka manampy ny lehilahy hijery ny tsara indrindra amin'izy ireo izy ireo, ary ny hany zavatra tokony hataon'izy ireo dia ny miala amin'ny fifandraisany.
handika: Nasongadiny ny ampahany lehibe indrindra, noho izany ny mpitsidika dia tsy mila mamaky na inona na inona afa-tsy ny lahatsoratra voasoratra ao anaty endri-tsoratra lehibe indrindra, satria manome fanazavana ampy.
Ohatra 5: Manolora fihenam-bidy
Mampahery hatrany ny fihenam-bidy. Rehefa ampidirinao amin'ny pop-ups misy fikasana izy ireo dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny karamanao.
Hatraiza ny fihenan'ny fihenam-bidy, miankina aminao irery ihany. Na ny fandrisihana kely aza dia mety hampitombo ny isan'ny varotra.
Ny magazay sasany dia manolotra fihenam-bidy matetika satria nivadika ho fampiharana tena matanjaka izy io.
Na tranokala lehibe sy malaza toa ny Mibahan ampiasao ny fihenam-bidy ho fomba hanintonana ny sain'ny mpitsidika.
vanim-potoana: Revolve dia tranokala fitafiana misy vokatra maro karazana, koa ny fanolorana fihenam-bidy dia afaka mandrisika ny olona hividy bebe kokoa amin'ny fikasana hamonjy vola.
Design: Hitantsika fa ny manampy ny vatan'olombelona dia fanao mahazatra ihany koa. Ity pop-up ity dia manana famolavolana classy miaraka amin'ny bokotra CTA mifanohitra.
Tolotra: Manolotra fihenam-bidy 10% izy ireo ary manampy anao hamonjy fotoana amin'ny fisafidianana ny iray amin'ireo sokajy telo natolotra.
handika: Ny firesahana mivantana dia fomba mahery iray hisarihana ny sain'ny mpanjifa.
Araka ny hitanao dia misy hevitra maro momba ny fomba hampiasanao ny pop-ups-fikasana mivoaka hanararaotra anao ary hananganana fifampitokisana amin'ireo mpanjifanao.
Azonao atao ny milalao ny endrika, mandika ary mampiditra tolotra samihafa hisarika ny sain'ny mpitsidika anao ary hampitombo ny fiovam-ponao.
Azo antoka fa ezaka kely io raha oharina amin'ny zavatra mety hataon'ity karazana pop-up ity ho an'ny orinasanao.
Minoa azy na tsia, ny fampiasana azy dia mety ho tsotra kokoa aza satria androany misy fitaovana afaka manampy anao hamorona pop-up mahomby ao anatin'ny 5 minitra.
Betsaka ny fitaovana toa ny Privy sy ny 'solony izany dia hanampy anao hamorona ny tranokala popups. Miaraka amin'ny safidiko sy safidinao safidy editor, custom pop-ups dia ho vonona amin'ny fampiharana.
Ampiasao ireo fomba fanao ireo rehefa mamorona pop-ups ary jereo hoe iza no manova ny tsara indrindra amin'ny tranga misy anao!
Tags: miantso-to-hetsikakitiho ny popuptaham-panovanapop-up fidiranafidirana popupfivoahanafipoahana fikasana mivoakafivoahana-finiavana tampokafamolavolana pop-uptolotra pop-uppop uptolotra mipoitrahoronana pop-upscroll popuppop-up ara-potoanapop-time